“सुनको कचौरा बोकेर भीख माग्ने हामी सधैं यसैमा मस्त !” – Nepal Japan
17 September, 2019 16:59 | अर्थ | comments | 37800 Views
नेपालमा जे छ त्यो विदेशीले चिनेका छन् र त उनीहरु भन्छन् “किन नेपाल सुनको कचौरा बोकेर भीख मागिरहेको छ अनि भीखबाटै देश चलाउँछु भनेर किन भनिरहेको छ ? किन आफ्ना स्रोत साधनहरुको उपयोगमा ध्यान दिंदैन र लगानीको साटो अनुदानमा जोड दिन्छ ?” यो यस्तो प्रश्न हो जुन प्रश्नले राज्य संचालन तहमा रहेकाहरुलाई भरपुर गिज्याउनुपथ्र्यो, तर उनीहरु आएको सानोतिनो भीखलाई दाताको उदारता भनेर सहर्ष स्वीकार्छन र यसले दुई देशको सम्बन्ध अरु मजबुत भएको बयान गर्छन् । के नेपाल केही करोडभन्दा बढीको सहायता पाउन योग्य छैन ? के नेपाल ५ हजार थान टेण्ट किन्न सक्दैन ।
३८ करोड रुपैयाँमा अस्पताल बनाउन सक्दैन ? यो यस्तो प्रश्न हो जसले दिनेलाई पनि र लिनेलाई पनि गिज्याउनुपर्ने हो तर, गिज्याउँदैन । सडकमा बसेको माग्नेलाई जति दिए पनि महाजनको इज्जत जाँदैन भनेजस्तै हो । डेढ साता अघी यस्तै देखियो नेपालको हकमा । चिनीया विदेशमन्त्रीको नेपाल आगमनका क्रममा धेरै अपेक्षा थियो नेपाली जनताको तर भयो यसको ठीक विपरीत । दुई देशबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकपछि भएको सहमतिबाट नेपाल भीख माग्न बसेको जस्तै देखियो । न दिने चीनलाई लाज लाग्यो न लिने नेपाललाई । यसलाई सम्बन्धितहरुले जतिसुकै बचाउ गर्न खोजे पनि देखिएको कुरा बोलिएको हो ।
चिनीया विदेशमन्त्रीले भीख दिएर गएको भोलिपल्ट काठमाडौंमा पूर्वाधार सम्मेलन भयो । सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको पूर्वाधार विकास र लगानीमा व्यापक भ्रम रहेको औंल्याउँदै अब पनि अरुले बनाइदिन्छ भनेर आशा गरेर बस्ने हो भने माथी उठ्न नसकिने सुझाव दिनुभयो । हाँले भन्नुभयो– “हामी ठूला शक्तिहरुले आएर दया गरेर अलि ठूलो भिक्षा दिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्छौं तर, भिक्षा कति पाइने रहेछ अस्ति मात्रै देखियो, कति करोडको अस्पताल र कति थान पालहरु, यही हो हामीले पाउने भिक्षा, त्यसैले भिक्षाको मानसिकता त्यागौं ।”
सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “हामीमा त हिजो शितयुद्धकै धङधङीले रेल आउँछ, बनाइदिुन्छ भन्ने छ । आफैंले बनाउने क्षमता छैन । त्यतातिरको हिसाब-किताब गर्नु छैन, आउँछ आउँछ भन्ने नारा मात्रै । यसमा म साथीहरुलाई दोष दिन्नँ । दृष्टिदोष कहाँनेर हो भने साथीहरुलाई हिजोकै शितयुद्धको धङधङी छ ।”
खासमा नेपालले चीनसंग लिन नसकेको हेन अरुको दवाव थेग्न नसकेको हो भनेर कूटनीतिक विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् । दुई वर्ष अगाडि चीनले अगाडि सारेको ‘ओबीओआर’ प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको कल्पित आरोप लगाएर वैदेशिक क्षेत्रमा चर्चा गरिने गरेको प्रसङ्गको अर्को कडी बनेको छ इण्डो प्इासिफिक रणनीति । यसमा नेपालको कूटनीतिक विफलता देखिन्छ । वैदेशिक सम्बन्ध परिचालनका निम्ति एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बन्न नसक्दाको परिणाम हो यो ।
चीनले दक्षिण एसियामा सबभन्दा कम लगानी गर्ने र आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरु खडा गर्ने मुलुकमा पर्दछ । श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्समा चीनले जसरी लगानी गरिरहेको छ नेपालमा त्यसको एक छेउ पनि छैन । यो कूटनीतिक विफलता हो र दुःख परेको बेलामा मात्रै चीन सम्झने चरित्रको कारणले हो । नाकाबन्दीका बेला चीनसंग भएका तमाम सम्झौताहरु अहिले धमिराको गुड बनेको सन्दर्भमा सुनको कचौरा बोकेर भीख माग्ने हामीमाा कहिले हो चेत आउने ?
राज्य संचालनमा रहेकाहरुमा देशभक्तिपूर्ण सोच र विकासको योजना भएन भने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ अनि त्यो मूल्यले राष्ट्रको प्रतिष्ठादेखि भएका सबै अवसर पनि गुम्छ, देश सधैं माग्ने नै भैरहन्छ । नेपालको हकमा यसतै भैरहेको छ । नेपाल सुनको कचौरीमा भीख माग्ने देशका रुपमा परिचित छ । भीख मागेर पेट पाल्ने बानी लागेकालाई उद्यम गर भन्यो भन त्यो कुरा चित्त बुझ्दैन र जेजति भीखमा आउँछ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छ । अब यो प्रवृत्ति बन्द गर । उद्योग खोल, मुनाफा कमाउ, यहाँ कर तिर, रोजगारी देऊ भन्न सक्नुपर्छ । सानातिना सहायता लिएर राष्ट्रकै बेइज्जत गर्नु भएन । आर्थिक कूटनीतिलाई स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अघि बढाउनुपर्यो ।